အလုပ်အမှုဆောင်ကော်ပိုရိတ်ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ပဋိညာဉ်စာတမ်း Omaha-, လင်ကွန်း, ဂရန်းကျွန်း, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီး Nebraska ဂျက်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ 888-634-6151 အချည်းနှီးသောခြေထောက်ပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှုအပေးအယူများအတွက်. သငျသညျစီးပှားရေးအတှကျ Nebraska ဧရိယာ မှစ. သို့မဟုတ်စေရန်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုရှာကြ၏, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖော်ရွေလေယာဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်သက်? သင်သည်သင်၏လာမည့်ခရီးလမ်းဆုံးရအကောင်းဆုံးအလေယာဉ်ကုမ္ပဏီအကူအညီမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစို့!
သငျသညျ Nebraska အတွက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းလျှင်အချိန်အတိတ်ကအရာရှိနိုင်ပါသည်စောင့်ဆိုင်း. ပျမ်းမျှချောင်းမြောင်းအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်4သို့6မိနစ္မ်ား. လှညျးစစ်ဆေးမှုများမှာရှည်လျားသောလိုင်းများရှောင်ရှားနေစဉ်သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစတင်, လက်မှတ်အရောင်း, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လုံခြုံရေးနှင့် boarding.
သငျသညျ Nebraska ဧရိယာ '' ကနေသို့မဟုတ် Empty ခြေထောက်သဘောတူညီချက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးတည်းသာလမ်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်၏အချည်းနှီးသောပြန်လာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်.
မဟာမိတျအဖှဲ့, NE Elkhorn, NE မျက်မှောက်, NE Offutt လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို, NE
Beatrice, NE Fremont, NE Lexington, NE Omaha-, NE
Bellevue, NE ဂရန်းကျွန်း, NE လင်ကွန်း, NE Papillion, NE
Chalco, NE လငျြအမွ, NE Norfolk, NE Scottsbluff, NE
ကိုလံဘတ်စ်, NE Kearney, NE မြောက်အမေရိက Platt, NE တောင်ပိုင်း Sioux City, NE
လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်သင်ဟာအတွက်ပျံသန်းနိုင်သည်လေဆိပ် chartering ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ပျံအဘို့သင့်အနီးဆုံးမြို့ထုတ်စစ်ဆေး & Omaha-ထဲက, လင်ကွန်း, ဂရန်းကျွန်း, Nebraska အတွက် chartering ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ပျံပေါ် Nebraska.
ဂရန်းကျွန်း GRI GRI KGRI ဗဟို Nebraska ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် P-N ကို 64,602
လင်ကွန်း လင့် လင့် KLNK လင်ကွန်းလေဆိပ် (လင်ကွန်းစည်ပင်သာယာခဲ့သည်) P-N ကို 160,525
Omaha- oma oma TO သို့ Eppley လေယာဉ်ကွင်း P-M က 2,046,179
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဝန်ဆောင်မှု - Nonprimary လေဆိပ်
Kearney EAR EAR KEAR Kearney ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Kearney စည်ပင်သာယာခဲ့သည်) CS 4,543
မြောက်အမေရိက Platt LBF LBF KLBF မြောက်အမေရိက Platt ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Lee က Bird ကိုကွင်းဆင်း) CS 4,628
Scottsbluff BFF BFF KBFF အနောက်တိုင်း Nebraska ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (ဝီလျံ B ကို. Heilig ဖျော်ဖြေမှု) CS 5,144
မဟာမိတျအဖှဲ့ AIA AIA KAIA မဟာမိတ်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA [NB 1] 1,474
Chadron CDR CDR KCDR Chadron စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA [NB 2] 1,715
McCook MCK MCK KMCK McCook ဘင်နယ်လ်ဆင်ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA [NB 3] 333
Omaha- (Millard) MLE မိတျဆှ KMLE Millard လေဆိပ် R ကို 0
Ainsworth ANW ANW KANW Ainsworth ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Ainsworth စည်ပင်သာယာခဲ့သည်) GA 27
Albion BVN KBVN Albion စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Alma 4D9 Alma စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Atkinson 8V2 စတူးဝပ်-Atkinson စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Auburn K01 Farington ဖျော်ဖြေမှု GA
aurora AUH ကြောကျဆူး aurora စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (အယ်လ် Potter ဖျော်ဖြေမှု) GA 29,970
Bassett RBE KRBE ရော့ခ်ကောင်တီလေဆိပ် GA
Beatrice Bie Bie KBIE Beatrice စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 7
တိုနီဘလဲ BTA KBTA တိုနီဘလဲစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
ကျိုးလေး BBW BBW KBBW Broken လေးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် (Keith glaze ဖျော်ဖြေမှု) GA
Burwell BUB BUB KBUB CRAM ဖျော်ဖြေမှု GA
ကိန်းဘရစ်ချ် CSB KCSB ကင်းဘရစ်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 0
ဗဟိုစီးတီး 07K သည် ဗဟိုစီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် (လာရီ Reineke ဖျော်ဖြေမှု) GA
ချာပယ်လ် စီအဲန်ပီ KCNP Billy, G. ray ဖျော်ဖြေမှု GA 1
ကိုလံဘတ်စ် ကြက်ဥ ကြက်ဥ Round ကိုလံဘတ်စစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 5
Cozad CZD KCZD Cozad စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Creighton 6K3 Creighton စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
ကရေတေ CEK KCEK ကရေတေကျွန်းအရှေ့ဘက်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Curtis 47V ကို Curtis စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
ဒါဝိဒ်သည်စီးတီး 93နှင့် ဒါဝိဒ်သည်စီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Fairbury FBY FBY KFBY Fairbury စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Fairmont FMZ KFMZ Fairmont ပြည်နယ်လေယာဉ်ကွင်း GA
ရေတံခွန်စီးတီး FNB KFNB Brenner ဖျော်ဖြေမှု GA
Fremont လုပ်ပြီး လုပ်ပြီး KFET Fremont စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Gordon ကမြင်ပါတယ် GRN GRN Kgrn ဂေါ်ဒွန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 4
ဂရန် GGF KGGF စည်ပင်သာယာလေဆိပ်ပေးသနား GA 1
Greeley 99နှင့် Greeley စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Hartington 0B4 Hartington စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (ဖူးအငုံထွက် Becker ကဖျော်ဖြေမှု) GA
ဟားဗတ် 08K သည် ဟားဗတ်ပြည်နယ်လေဆိပ် (ဟားဗတ်ပြည်နယ်လေယာဉ်ကွင်း) GA
လငျြအမွ HSI HSI KHSI အလျင်အမြန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
ဟေဗြုန်မြို့, HJH KHJH ဟေဗြုန်မြို့စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Holdrege HDE HDE Kdae Brewster ဖျော်ဖြေမှု GA
Hyannis 1V2 Grant ကကောင်တီလေဆိပ် GA
မင်းဧကရာဇ်၏တိုင်းနိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သော IML IML ဆက်သွယ်ရေး Imperial စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Kimball IBM က KIBM Kimball စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (ရောဘတ်အီး. Arraj ဖျော်ဖြေမှု) GA
Lexington LXN LXN KLXN ဂျင်မ်ကယ်လီဖျော်ဖြေမှု GA
Loup စီးတီး 0F4 Loup စီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
အားလုံး 0V3 ရှေ့ဆောင်ကျေးရွာရှိလယ်ကွင်း GA
Nebraska စီးတီး AFK KAFK Nebraska စီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Neligh 4V9 ဘမ်းမိသောစိုင်ကောင်တီလေဆိပ် GA
Norfolk OFK OFK KOFK -Norfolk ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (ကားလ် Stefan သတိရအောက်မေ့ဖျော်ဖြေမှု) GA 4
အိုနေးလ် ONL ONL KONL အဆိုပါအိုနေးလ်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (ယောဟန်သည် L ကို. Baker ဖျော်ဖြေမှု) GA
Ogallala OGA OGA WHO က Searle ဖျော်ဖြေမှု GA 1
စကားလုံး ODX KODX အီဗလီန် Sharp ကဖျော်ဖြေမှု GA
Oshkosh OKS OKS ဘယျအရာ ဥယျာဉ်တော်ကောင်တီလေဆိပ် GA 1
Pawnee အဘိဓါန်စီးတီး 50K သည် Pawnee အဘိဓါန်စီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Pender 0C4 Pender စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Plattsmouth PMV KPMV Plattsmouth စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
အနီရောင်တိမ်တိုက် 7v7 အနီရောင်တိမ်တိုက်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Rushville 9V5 Modisett လေဆိပ် (Modisett ဖျော်ဖြေမှု) GA 2
Sargent 09K သည် Sargent စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
ခရစ်ဗ်နာ SCB SCB kscb ခရစ်ဗ်နာပြည်နယ်လေဆိပ် (ခရစ်ဗ်နာပြည်နယ်လေယာဉ်ကွင်း) GA
Seward SWT KSWT Seward စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Sidney ဖြတ် ဖြတ် KSNY Sidney စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (လွိုက် W က. Carr ကဖျော်ဖြေမှု) GA
အကောင်းဆုံး 12K သည် သာလွန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Tecumseh 0G3 Tecumseh စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Tekamah TQE KTQE Tekamah စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Thedford TIF KTIF သောမတ်စ်ကောင်တီလေဆိပ် GA 1
ချစ်သူများနေ့ VTN VTN မေလ၏ Miller ကဖျော်ဖြေမှု GA 9
Wahoo AHQ KAHQ Wahoo စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Wallace 64V ကို Wallace စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
ဝိန်း LCG KLCG ဝိန်းစည်ပင်သာယာလေဆိပ် (Stan မောရစ်ဖျော်ဖြေမှု) GA
York မြို့ JYR KJYR York မြို့စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Alma H63 Harlan ကောင်တီရေကန်ရေယာဥ်ပျံအခြေစိုက်စခန်း
Arapaho 37V ကို AHF Arapaho စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Bloomfield 84နှင့် Bloomfield စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
ဂျီနိုအာ 97နှင့် ဂျီနိုအာစည်ပင်သာယာလေဆိပ်
ဂို GTE KGTE Quinn ဖျော်ဖြေမှု
hay Springs 4V6 hay Springs စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Mullen MHN MHN KMHN ဟွတ်ကောင်တီလေဆိပ်
Omaha- 3NO မြောက်အမေရိက Omaha-လေဆိပ်
တောင်ပိုင်း Sioux City 7K8 မာတင်ဖျော်ဖြေမှု
Springfield 72NE J ကို&J ကိုလေဆိပ် 25
Trenton 9V2 Trenton စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
ဥတီဂ် 0J9 ပျံ V ကိုလေဆိပ်
Omaha- OFF OFF KOFF Offutt လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း 988
ငိုကြွေးခြင်းရေ NE69 EPG ကို အညိုရောင်လေဆိပ်
အာသာ 38V ကို အာသာစည်ပင်သာယာလေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 2010?) 
Bruning Bruning တပ်မတော်လေယာဉ်ကွင်း
Harrison 9V3 Harrison Skyranch (ပိတ်သိမ်း 2006?) 
McCook McCook တပ်မတော်လေယာဉ်ကွင်း
Nebraska စီးတီး 3Gn Grundman ဖျော်ဖြေမှု (ပိတ်သိမ်း 2003?) 
Papillion တောင်ပိုင်း Omaha-လေဆိပ် (ခန့်ပိတ်ထား 1986) 
Springview 9V1 Springview စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 2008?) 
Wilber 0D6 Wilber စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 2008?) 
ပဋိညာဉ်စာတမ်းပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Wyoming | ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားကုန်ကျစရိတ် Omaha-
ချီကာဂိုအီလီနွိုက် Empty ခြေထောက်နဲ့ မှစ. သို့မဟုတ်ရန်ခုနှစ်တွင်ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း